Manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Tamasgen Xiruuneh pireezidantii naannichaa gochuun muude.
Abbaan Alangaa Naannoo Amaaraa namoota gocha Waxabajjii 22, 2019 naannichatti uumameen shakkaman to'annoo jala akka oolfaman taasisaa jiraachu beeksiise.
Poolisiin magaalaa Buraayyuu haadha warraa B/J Asaamminaw Tsiggee to'annoo jala oolche
Haati warraa qondaala nageenyaa ajjeechaafi fonqolcha mootummaan himatamni poolisiin magaala Buraayyu hidhe.
Gaazexeessituu Faasikaa Taaddasa: ''Sagaleen gad-lakkifame kan isaanii akka ta'e nan tilmaama''
Gaazexeessituu Faasikaa Taaddasa battala ajjechaan qondaaltota irratti raawwate B/J Asaaminaw Tsiggee dubbisuu ishee dubbatti. Qondaalli ajjeechaa kanaan shakkaman maal jedhaniin?
Dhabbanni Sochii Biyyaalessaa Amaaraa miseensoonni kiyya 100 ol hidhaman jedhe
Dhabbanni Sochii Biyyaalessaa Amaaraa erga guyyaa Sanbataa as Finfinnee fi naannoo Oromiyaa qofatti miseensoonni kiyyaa 100 ol ta'an hidhamaniiru jechuun BBC'tti hime.
Reeffi Birgaader Janaraal Asaamminewu Tsiggee Kibxata waaree booda buufata xiyyaaraa Laalibalaa gahuu isaa kantiibaa itti aanaan magaalaa Laalibalaa Obbo Maandafroo Taaddasaa BBC'tti himaniiru.
''Yaallii fonqolcha'' Sanbata naannoo Amaaratti yaalameen duuba jiru jedhamanii kan shakkaman Janaraal Asaaminew Tsiggee eessa akka jiran akka hinbeekamne, itti gaafatamaan biiroo nageenya Uummataa fi Ijaarsa nageenyaa naannichaa BBC'tti himan.
Kamisee: Godina Saba Oromoo naanno Amaaraatii eenyufaatu to'atame?
Godina Saba Oromoo naannoo Amaaraatti tibbana namootni ''nageenya booressan'' jedhamuun shakkaman to'atamaa jiru. Abbaan Alangaa waliigalaa naannoo Amaaraa namootni naannicha bakkeewwan garaagaraatti nageenya booressuun shakkaman 224 to'annoo jala ooluun qoratamaa jiraachuu himaniiru.
Pirof. Asaffaa Jaallataa: Itoophiyaa keessa sabboonummaa cunqurfamaafi cunqursaatu jira'
"Sabboonummaa Amaaraa durumaa kaasee huccuu Itoophiyaa uffatee jiraachaa ture. Yeroo namatti bahan sabboonummaa Itoophiyaa dubbatu garuu kan Amaaraadha."
Walitti bu'iinsaa fi rakkoolee nageenyaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti uumamaa jiru humna waraanaan bakkatti deebisuun ni danda'amaa?
Jeequmsa Yuunvarsitii Dabra Maarqositti uumameen barataan tokko ajjeefame, kaan madaa'an
Walitti bu'iinsa yuunvarsitii Dabramaarqootti umamee tureen barataan tokko du'u barattoonni dalichaa BBC'tti himan. Barataan ajjeeffamees Sa'aara Abrihaa kan jedhamu yoo ta'u, barataa goosa barnootaa dinagdee waggaa sadaffaati.
Obbo Taaddasaa Kaasaa: ‘Ammaatti mirga wabiin gadhiifamuu hin gaafadhu’
Manni murtii Waliigalaa Naannoo Amaaraa himannaan Obboo Barakat fa'aarratti dhiyaate mirga wabiin gadhiifamuu waan hin eeyyamneef mana amala sirreessaa turanii himannaasaanii akka hordofan murteesse.
Aanga'aan Naannoo Beneshaangul Gumuz daa'immaniifi dubartoota dabalatee naannicha bakka Jaawwii jedhamutti 'ajjechaan jumlaa' raawwatamuu dubbatan.
3 Caamsaa 2019
Jiraataa Magaalaa Amboo kan ta'an Obbo Tasfaayee Dhaabaa gaaffiiwwan qalbii namootaa hawwatan Pirezidaantii Naannoo Amaaraa Ambaachoo Makonnin gaafataniiru.
Mariin obbolummaa Oromiyaa fi Amaaraa ibsu Dilbata dhufu Magaalaa Ambootti geggeeffamuuf.
Rakkoon nageenyaa bulchiinsa Naannoo Amaraaa Godina Saba Oromootti uumamee ture gara aanaalee hollaa Shawaa Kaabaatti baballatee lubbuun namootaa darbee qabeenyis manca'ee ture.
Ibsi ajajaa olaanaan waraana Itoophiyaa kutaa Kaabaa waldhabdee naannoo Amaaraatti mudate ilaalchisuun kennan 'sirrii miti' jedhan aanga'aan naannichaa.
Dhukaasa tureen lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan dhaqqabeera
Gara aangootti dhufuu Dr Abiyyiin wal qabatee Itoophiyaan waggaa tokko darbeef daandii ceehumsaarra turte. Cehuumsa kana danqaawwan hedduun itti baayyachuunsaa gaaffii fi shakkii umaa jira.
Baankichis buqqaattoota naannoolee biyyattii garaa garaa keessatti argamaniif kan oolu deeggarsa qarshii miiliyoona 100 taasisuu isaa kan beeksise torban darbe keessa ture.